August 2011 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Ka Yin Lay created the doc:
မြန်မာပြည်ရဲ့ရှိတ်စပီယားလို့ အမည်တတ်ခံရတဲ့စလေဦးပုညဟာ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပြည့်စုံသူမဟုတ်ပါ
ကျွန်တော်သည် ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ“သာဓု”၏သား ဖြစ်သော်လည်း ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ“သုခ”နှင့် ရုပ်ရှင်အလွန် ရိုက်ချင်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် “အကယ်ဒမီ” ရပြီးသည့်တိုင် ဆရာက ခေါ်မရိုက်ခဲ့ပေ။ ထို့အတွက် ဆရာ့အား မကျေမနပ် ဖြစ်နေခဲ့ပါ⋯⋯သည်။
သို့သော် တစ်နေ့တွင် “ဆရာ”က ကျွန်တော့်ထံ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖုန်းဆက်ပါသည်။
“ဆရာသုမောင်ရေ ကျွန်တော်ဦးစီးတဲ့ “အမေများ”နေ့အတွက် ကျွန်တော် ရေးတဲ့ “အမေ” သီချင်းကို တီဗွီရိုက်ရင်း သီဆိုဖို့ ဆရာ့ဆီ အကူအညီတောင်းတာပါ” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ဘဘအပေါ် စိတ်ကောက် နေသည်များ ပြေပျောက် ရုံမက ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်လျက်ဘဘ၏ ခဲတစ်လုံး “ငှက်သုံးကောင် ပစ်နိုင်သော “တင်္ခဏုပ္ပတ္တိ” ဥာဏ်ကို ရှိခိုး ပူဇော်မိပါတော့သည်။
အခုတလော ဘာစာမှလည်း အသစ်မရေးဖြစ် ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော့် Blog ကို ပြန်မွှေလိုက်တော့ ထွက်လာတဲ့ တင်ပြီးသား ဟာသ ဝတ္ထုတို အဟောင်းလေး တစ်ပုဒ်ကိုပဲ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ “၂၁ ရာစု ဒဿဂီရိ” ပါတဲ့။ တကယ်တော့ ဒီဝတ္ထုတို လေးဟာ ကျွန်တော့် စာပေဘဝရဲ့ အမှတ်တရပါ၊ မှတ်တိုင် တစ်ခုပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဟာသဝတ္ထုတို ပြိုင်ပွဲ လုပ်တော့ ကျွန်တော် ဒီဝတ္ထုတိုလေးနဲ့ ဆုရပြီး စာပေလောကထဲ စရောက် ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ရေးဖြစ်တဲ့ ဟာသဝတ္ထုက ဆုရတာ တစ်ကြောင်း၊ စာပေလောကထဲ ပထမဆုံး ရောက်စေခဲ့တဲ့၊ ပထမဆုံး လောက်လောက် လားလား ပုံနှိပ်ဖော်ပြ ခံခဲ့ရတဲ့ စာမူမို့လို့ပါ။
Facebook နဲ့ Privacy အကြောင်း
by Phota Yoke on Thursday, September 1, 2011 at 11:24am
http://www.htootayzar.com/myblog/2010/05/facebook-and-privacy/ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Facebook သုံးသူတိုင်း ဒီလို စာမူမျိုးတွေ ဖတ်သင့်တယ်ထင်လို့ ရှယ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီနေ့တော့ Facebook နဲ့ privacy အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ personal မြင်တာပဲပြောမှာပါ နဲနဲတော့ လန့်တယ် လူတွေက တစ်ခုခုဆို ဘာရယ်မဟုတ် copy ကူးပြီး forward mail လုပ်တတ်ကြသေးတာကိုး.. အရင် တစ်ခေါက်ကလဲ ပြသနာ အပြုံလိုက်ရခဲ့ပြီးပြီ။
Author: lubo601 | 10:11 AM | No မှတ်ချက် |
by Myanmar Jokes on Wednesday, August 31, 2011 at 2:59pm
လူနာများကို ရောဂါသက်သာမသာ စစ်ဆေးရန်
ခုံတန်းများတွင် ဆေးများသုတ်ထားပြီး ရုပ်ရှင်ပြသည်။
ထိုအထဲတွင် လူနာတယောက်က သတင်းစာကိုခုံတန်းတွင်ခင်းလိုက်သည်။ ပြီးမှကြည့်သည်…
လက်ရှိ အစိုးရမှ ကျင်းပနေသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)မှ ဦးဇာယာဒ်ရော်မံ (ခ) ဦးဌေးဝင်းက ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တော ဒေသတွင် နေထိုင်သော မွတ်ဆလင်များ အပေါ် ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့က... လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းခဲ့သည်။ လွှတ်တော် အမတ် ဦးဌေးဝင်းနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီတို့၏ အမေးအဖြေမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသဖြင့် အောင်တွင် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မြောက်ဥရောပက ဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ သာမန်လူ အရပ်အမောင်းလောက်
ရှိတဲ့ ဘုရားသခင် ရုပ်တုတော်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဆုတောင်းတိုင်း
ပြည့်တဲ့အတွက် လာရောက်ဆုတောင်းကြတဲ့ လူတွေအထူးများပြားခဲ့တယ်။
ဘုရားကျောင်း တံခါးစောင့်ဟာ ကန့်လန့်ဖြတ် သစ်သားပေါ်က လူတွေရဲ့...
တောင်းသမျှဆုကို ပြည့်ဝအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ကိုကြည့်ပြီး
by ရသစာပေအနုပညာဘလော့ဂ် on Wednesday, August 31, 2011 at 3:30pm
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက် သုံးစွဲသူများ၏ လောကမှာ အားလုံးလိုလို ကြောက်ရွံ့ရသော လူတန်းစား တစ်ရပ် ရှိသည်။ ဟက်ကာ (Hacker) ဖြစ်၏။ အင်တာနက် သုံးတတ်ခါစ ကိုယ့်ရှေ့မှ စီနီယာ ကိုကိုမမ များက မိမိတို့၏ စကားဝှက်များ မပျောက်ပျက်ရန် အထူးထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခိုင်းသည့် အကြောင်းအချက် များထဲတွင် ထိုဟက်ကာ များကို ရည်ရွယ်သမှု အများဆုံး ပြုကြသည်။
အသိဥာဏ် + ကိုယ်ကျင့်တရား
တစ်ခါက အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုသည် စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်နေသော လူငယ်တစ်ဦးကို အင်တာဗျူးလေသည်။
အင်တာဗျူး၏ နောက်ဆုံးတွင် ထုံးစံအတိုင်း မေးမြန်းသူက လူငယ်အား....
လူငယ်မှာ ခဏမျှစဉ်းစားပြီး အဖြေကို တိုက်ရိုက်မဖြေဘဲ အောက်ပါ ပုံပြင်ကို ပြောပြသွားခဲ့သည်။(ဆက်ဖတ်ရန်)
Author: lubo601 | 9:25 AM | No မှတ်ချက် |
အစိုးရသစ်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့က ဦးဝင်စတန်ဆက်အောင် ပြောလိုက်တဲ့ ပညာတတ်များပြန်လည်ခေါ်ယူရေး ဆိုတာလေး ကြားပြီးကတည်းက ကျမ ရင်ထဲမှာ ပြောချင်တာလေးတွေ ပလုံစီနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း စာချောအောင် မရေးတတ်၊ ကွန်ပျူတာကလည်း ဝလုံးတန်းဆိုတော့ စာရိုက်ရမှာ ကြောက်တာတွေပေါင်းပြီး လက်တွန့်နေမိပါတယ်။
၅-၈-၂၀၁၁ ကြေးမုံသတင်းစာမှာပါတဲ့ မောင်တင်အေး (သရက်) ရဲ့ နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာခြင်း ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရတော့ ပြောချင်စိတ်တွေ တားမရတော့ပါဘူး။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ဒီ Post လေးတင်ပြီး ရင်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ အပြော မတတ်လို့ ဆဲသလိုဖြစ်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် စီးပွားရေးပညာ ဘာသာရပ်ဖြင့် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့သူ ဒေါက်တာဇော်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
[By Nyi Mg]
" လုပ်စရာရှိတာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ခြင်းဟာ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဟာ ဖြစ်မှ လုပ်ရတာထက် ပိုကောင်းပါတယ် "
... ဒေါက်တာဇော်ဦးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပညာ ဘာသာရပ်ဖြင့် ပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D) ရထားသည့် ပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။
"ပညာရေး- ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယ အသုံးချမှု အနုပညာ (Education)"
လူဆိုတာ မွေးဖွား လာပြီးကတည်းက ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး မရပ်မနား သင်လိုက် ကြရတဲ့ ပညာ။ ကုန်ခန်း နိုင်သည်လည်း မရှိ။ အစဉ်အမြဲ ပိုလို့ လျှံလို့၊ တိုးလို့ ပွားလို့သာပင်။
Life is short, but art is long လို့တောင် ဆိုထားတယ် မဟုတ်ပါလား။ ဦးစွာ ပထမ ပညာရဲ့ အမိုးအောက်က ပညာရေး (Education ) ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုပုံကို လေ့လာ ကြည့်ကြမယ်လေ။ Oxford Advanced Learner’s Dictionary မှာ ပညာရေးကို အနက် ဖွင့်ထားပုံက ဒီလို-
EducationisaProcess of training and instruction,especially of Children and young people in schools, colleges, etc., Which is designed to give knowledge and develop skills.
by Thway Thitsar on Wednesday, August 31, 2011 at 1:32pm
ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲရောက်ရောက် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်ပြီး အသက်အရွယ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မှတ်ဉာဏ် ပြဿနာတွေ မကျရောက်စေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကော်ဖီသောက်တာဟာ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်စေခြင်းနဲ့ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းစတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရှိစေကြောင်း အရင်လေ့လာမှုတွေက ဆိုထားပါတယ်။ အခုလတ်တလော လေ့လာမှုအရ နေ့စဉ်ကော်ဖီကို အသင့်အတင့်နဲ့ ကြာကြာသောက်တာဟာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
"တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး "
Author: lubo601 | 1:07 AM | No မှတ်ချက် |
တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပျက်ပြားခြင်း အပေါ် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်၏ သဘောထား
(၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့ထုတ် The Hot News ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်စဉ်က အာဏာ သိမ်းထားပေးမယ့် ဖဆပလ၊ ပမညတ စတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီများကို မဖျက်သိမ်းသေးပါ ဘူး။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်ကျမှ ဖျက်သိမ်း လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပျက်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာ နိုင်အောင် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ )
Author: lubo601 | 1:01 AM | No မှတ်ချက် |
by Maung Maung Than on Wednesday, August 31, 2011 at 9:29am
အရေးပေါ် ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံတင်ခြင်လို့ ပါ
ဒီဓါတ်ပုံများ ဒေါက်တာဆိုင်းအောင် ပါရဂူဘွဲ့ လုပ်ကျကထဲကရထားပါတယ် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်က ဆရာမ အခုဒေါက်တာကလျာလူနဲ့ အတူတူ မိန်းကလေး ၂ယောက် ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့စာတမ်းပါ။ အဲဒီအပင်ကြီး မရှိတော့ပါ။
May Hnin Phyu created the doc:
Dwelling online isacowardly and utterly enjoyable alternative to real interaction.”
အဲဒါက အရင်ကတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ချေက အလွန်နည်းလာပါပြီ။ လူတွေက facebook၊ my space၊ twitter၊ tagged တွေကို အသုံးပြုပြီး အချင်းချင်းဆက်သွယ်လာကြတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကုန်လုံးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချပြလာကြတယ်။
[By Han Thit Nyeim]
ဒါ ကျုပ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဗျ။
အာ... မထိခိုက်ချင် ဖယ်နေပေါ့ဗျာ။
"ဟိုရှေးအနှစ် ၂ဝ ကျော်က"
တပ်မတော်ဘက်က စတင်မီးမွှေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ကိစ္စ ၂ ရပ်က စစ်အာဏာသိမ်းပွဲတွင် လမ်းစထွင်ပေးပုံ ရှိသည်။ ပထမကိစ္စတွင် စစ်ရုံးအနီး ဆန္ဒပြလူအုပ်ကို ဂိတ်ဝမှ ဖယ်ခိုင်းရာတွင် စစ်ကားတန်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်က ဓားလှံများကိုင်၍ စစ်ရုံးဝ ရောက်လာသည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် အတိုက်အခံလူကြီးများ အခြေအနေကို ဖြေရှင်းပေးရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၇ တွင်လည်း ကုန်သွယ်ရေးရုံးက တပ်သားတစု ဆန္ဒပြလူအုပ်ကို ပစ်ခတ်ရာ အနာတရရကြသည်။
ဟိုရှေးအနှစ် ၂ဝ ကျော်က အပိုင်း (၁)
Min Thant Syn createdadoc
အနီးသမိုင်းဟု ထင်ခဲ့စေကာမူ ၂ဝ အောက်တန်း လူငယ်များ အတွက်ကား ၈၈ အရေးအခင်းမှာ ယုံတမ်းသဖွယ်ဖြစ်နေလေပီ။ ကျနော်တို့ရွယ် ၃ဝ တန်းများလောက်သာ အရေးအခင်းတုန်းက ဟူသော အသံကြားတိုင်း လတ်ဆတ်သော မကျေမချမ်းမှုများ ပေါ်လာစမြဲ။ လမ်းမပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားသော လူစုလူဝေးကြီး၏ အသံများကို ပြန်ကြားဆဲ။ မကြုံဘူးသူများမှာကား ဘုန်းကြီးဆန္ဒပြပွဲ ကျမှ နိုင်ငံရေး မူလတန်းကို အောင်စာရင်း ထွက်ခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပါလား။
by Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ on Wednesday, August 31, 2011 at 4:37am
ကဒါဖီ ဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါလဲနှင့် အခြားဆက်စပ်သတင်းများ
by Myanmar Journal on Wednesday, August 31, 2011 at 4:49am
ကဒါဖီ အိမ် က သူထိုင်တဲ့ ဆိုဖာကဒါဖီ ဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါလဲ
လစ်ဗျားက အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင် ကာနယ် ကဒါဖီ မိသားစုတွေ သုံးစွဲတဲ့ ရွှေ တွေ၊ မွမ်းမံခြယ်သထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ရွက်လှေတွေ စတာ တွေ ကို က အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ တန်ပါတယ်။
လစ်ဗျားဟာ ကမ္ဘာမှာ နဝမ မြောက် ရေနံ အထုတ်လုပ်ဆုံး နိုင်ငံ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 7:17 AM | No မှတ်ချက် |
by Nyi Nyi Aung on Tuesday, August 30, 2011 at 8:36pm
နောက်လိုက်မှု အနုပညာ - ဇေဝင်းနောင်
အလက်ဇန်းဒါးဟာ အိန္ဒိယကို အောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဆီဇာဟာ ဂေါလ်တွေကို အနိုင် တိုက်ခဲ့တယ်။
သူ့တပ်မှာ ထမင်းချက် တစ်ယောက်တောင် မပါဘဲနဲ့လား။
စပိန်ဘုရင် ဖိလစ်ဟာ သူ့ရေတပ်မတော်ကြီး နှစ်မြှုပ် ဖျက်ဆီးခံရချိန်မှာ
မျက်ရည် ကျသတဲ့။ အခြားသော မျက်ရည်များရော မရှိခဲ့လေသလား။
အမှန် တစ်ခု အမှား အနန္တ
by Aungzaw Win on Tuesday, August 30, 2011 at 1:36am
ကိစ္စတစ်ရပ်တွင် အဖြေမှန် တစ်ခုရှိသည် ဆိုပါစို့၊၊ အဖြေမှား အနန္တရှိသည် ဆိုပါက လက်ခံနိုင်ကြပါမည်လား၊၊
အမှတ်စက်၂ခု ကြားတွင် အတိုဆုံးအဖြစ် မျဉ်းဖြောင့် တစ်ကြောင်းကိုသာ ရေးဆွဲနိုင်ပါသည် ၊၊
ထိုအမှတ်စက် ၂ခု ကြားတွင် မျဉ်းကွေးပေါင်း အနန္တရေးဆွဲနိုင်ပါသည် ၊၊
ဤသို့ အလားတူ ဆင်ခြင် ကြည့်လိုက်လျင် အမှန်တစ်ခု တိုင်းအတွက် အမှားအနန္တရှိကြောင်းအလွယ် သတိပြုမိပါမည်၊၊
Author: lubo601 | 5:45 AM | No မှတ်ချက် |
by The Voice Weekly on Tuesday, August 30, 2011 at 3:37pm
နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဆောက်အအုံတွင် ကျင်းပလျှက်ရှိသည့် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ (ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့)တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွှန့်၏ "အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်များ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား ဤလွှတ်တော်က မေတ္တာရပ်ခံရန် အဆို" နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ထောက်ခံ အတည်ပြုချက်များနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၏ ကြီးကြပ်၊ ထိန်းသိမ်း အတည်ပြုချက် ရယူပုံများကို အရင်းအတိုင်း မချွင်းမချန် စုစည်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
အမျိုးသားများတွင် ဖြစ်ပွားသော ဒူလာရောဂါကို ဂေါက်ဟု ဆိုကြသည်။ ဂေါက်ရောဂါသည် အမျိုးသားများတွင်သာမက အမျိုးသမီးများတွင်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဂေါက်ရောဂါဟူသည် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် အများဆုံး ဖြစ်ပွားသည်။
ဂေါက်ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ သွေးထဲတွင် ယူရစ် အက်ဆစ် (Uric Acid) များသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယူရစ် အက်ဆစ် ဆိုသည်မှာ ပရိုတင်းတမျိုးဖြစ်သော ပြူရင်း (purine) မှတဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အက်ဆစ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်ကို လွမ်းနေတဲ့ မော်ဒန်ပန်းချီဆရာ
Author: lubo601 | 5:31 AM | No မှတ်ချက် |
by The Irrawaddy (Burmese Version) on Tuesday, August 30, 2011 at 7:16pm
ကိုစိုး	Tuesday, 30 August 2011 18:45	ဆောင်းပါး
ပန်းချီပေါ်သိမ်းအရောင်တွေ၊ အရုပ်တွေ၊ အလင်းအမှောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းခင်းကျင်းထားတဲ့ I am Cadmium Red ဆိုတဲ့ ခန်းမထဲကို ရောက်သွားရင်ပဲ နားထဲမှာ ဘုရားပုထိုးစေတီတွေရဲ့ ဆည်းလည်း လှုပ်သံတွေ၊ ဦးပဉ္ဇင်းတွေ ကိုရင်ကလေးတွေရဲ့ စာဝါလိုက်သံတွေ၊ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ တရားသံတွေကို စိတ်အာရုံမှာ ခံစားကြားယောင် လာမိတယ်။
"အမေက ငယ်သေးတယ် တဲ့ရှင်.... "
မနက် ကျွန်တော် လမ်း လျှောက်ပြန် လာတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မနက် ၇နာရီ ဝန်းကျင်ပေါ့။ ကျွန် တော် ပြန် ရောက် တတ်တဲ့ အချိန် လောက်မှာ ကလေးလင်မယား ကလည်း ပြိုင်တူလို ရောက်လာ တတ်ကြပါတယ်။ တိုက်ခန်းရှေ့ ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ သူတို့စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်က စက်တောင်မသတ် သေးဘူး။ ကောင်မလေးက သူ့ အမေကိုအော်ခေါ်တဲ့ မားမား ရေ ဆိုတဲ့ အသံက ထွက်လာပါ တယ်။ ဒီကလေး လင်မယားနှစ် ယောက်ဆိုတာ တက္ကသိုလ် အဝေး သင် တက်နေရင်းကျောင်းမပြီးသေး ဘဲအိမ်ထောင်ကျသွားကြတာပါ။
"စက္ကူ အစားထိုး အသုံးပြုစရာများ "
စက္ကူပြုလုပ်ဖို့ သစ်ပင်တွေ ခုတ်လှဲခြင်း ခံရပါသည်။ ယခု အခါ အချို့သော ကုမ္ပဏီတွေဟာ သစ်ပင် ကြီး(Tree)များက ထုတ်လုပ်ထား တာ မဟုတ်တဲ့ Tree-free Paper တွေ ထုတ်လုပ် လာကြပါသည်။ စာရေး ကိရိယာတွေ၊ စာအိတ်တွေ၊ မှတ်စု စာအုပ်တွေ ဝယ်ယူတဲ့ အခါ ဘယ်လို စက္ကူ အမျိုးအစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထား တာလဲ ဆိုတာကို လေ့လာပါ။
"အတုယူ မမှားစေလို "
ယနေ့ခေတ် လူငယ် များဟာ အတတ်ပညာ များကို သိမြင်ရုံဖြင့် တတ်သိ နားလည် သဘောပေါက် လွယ်နေ ကြပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါး မှ အတတ်ပညာဗဟုသုတများကို သိမြင်ရုံဖြင့် တတ်သိ နားလည် နေတဲ့ခေတ်မှာ မကောင်းသော အတတ်ပညာ၊ အတွေးအခေါ် အယူအဆ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု များကိုအတုမမှားအောင်ဆင်ခြင် စဉ်းစားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ လူငယ်လေးများ အတုယူမမှားစေ ရန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအနေနီးသူ လူကြီးများ၏ပြောဆိုဆုံးမနေထိုင် မှုပေါ်၌မူတည်ပါတယ်။
by Zegyo Mandalay on Tuesday, August 30, 2011 at 7:06pm
"သန်းခေါင်ည ဆေးထဖွာရတော့လည်း အခါခါ "
ကျွန်တော် အထက် မိုး ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကြယ် တို့လည်း ရှိရဲ့၊ တိမ် တို့ လည်း ရှိရဲ့၊ တိမ်လိပ်၊ တိမ်စု တွေဖြတ်သွားတဲ့ အခိုက်မှာ ကြယ်တွေ ပျောက်ကုန်ရော၊ တိမ်ဆိုင် တိမ်ထုတွေ လွန်သွားရင်တော့ ကြယ်ကလေးတွေဟာ တလင်း လင်း၊ တဖိတ်ဖိတ်နဲ့ ပြန်ပေါ်လာ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ တထောင်း ထောင်းထနေတဲ့ ဆေးလိပ်မီးခိုး ငွေ့တွေ အရှင်းမှာ ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို အထင်းသားတွေ့ရပြီး ဖွာထုတ်လိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့ တွေအဖုံးမှာတော့ မီးခိုးငွေ့နဲ့အတူ အတွေးစ၊ အတွေးစုတွေ ဖုံးသွား လိုက်တာ မိုးတောင် လင်းလုလု။ ခက်တော့ ခက်သားဗျ။
"တည်ရှိခြင်း၏ ဆန်းကျယ်မှု "
Author: lubo601 | 5:04 AM | No မှတ်ချက် |
ကျွပ်န်ုပ်တို့ တည်ရှိနေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်က တိုတောင်းနေတယ်။ ထိုအချိန်အတွင်းမှာပဲ လေ့လာ စူးစမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကြ၀ဠာကြီးရဲ့ သေးငယ်လွန်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်း လောက်ကိုပဲ လေ့လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် လူသားတွေဟာ စပ်စုတတ်တဲ့ မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာ လေ့လာစူးစမ်းကြတယ်။ အဖြေတွေကို ရှာဖွေကြတယ်။ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက သက်ရှိတွေဟာ ကြင်နာတတ်သလို ရက်လည်းရက်စက်တတ်တယ်။ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ အထက်မိုးကောင်းကင်ကြီးကို ငေးမောကြည့်နေတတ်တယ်။ လူသားတွေဟာ အလွန်များပြားလှတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အမြဲတမ်း မေးနေတတ်ကြတယ်။
ကျောင်းတွေမှာ နိုင်ငံရေးပညာ သင်သင့်သလား
by Lu Cifer on Tuesday, August 30, 2011 at 5:21pm
နိုင်ငံရေးပညာဆိုတာ ကျွန်တော်က "Political Education" ကို ပြောတာပါ။ အစဉ်အလာ ပညာသင်ကြားမှု ပုံစံထဲကို နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားလေးတွေ ထည့်သွင်းသင်ကြားပြီး လူငယ်တွေကို နိုင်ငံရေးပညာပေးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
by Lu Cifer on Tuesday, August 30, 2011 at 5:58pm
ဒီလို “နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်း” ထဲ ရောက်လာဖို့အကြောင်းက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအရေး … စတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေ တွေ့နေရာကနေ လျော့ပါး လွတ်မြောက်အောင် “ဟန်ဆောင် စကားဝိုင်း” ဖွဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်လောက်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 1:25 AM | No မှတ်ချက် |
[By Sai Naw Saing]
နားမလည်ဘူး အင်္ကျံ (စစ်တော် ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်၊
၀တ်ထားသော အင်္ကျံကို နားမလည်ဘူး အင်္ကျံဟု ခေါ်ပါသည်။ ထို အင်္ကျံ၏ အဆင်မှာ ခါးသက်သက်အရသာ
“ဗမာလုပ်လိုကမှဖြင့် ဒီလိုချည်းပဲ”၊ “ဗမာတွေကိုက ဘယ်နေရာမှမကောင်းပါဘူး”၊ “ဘယ်တော့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ၊ ဗမာလုပ် တာကိုး”၊ “ရွှေဗမာတွေကိုက ဘာတစ်ခုမှဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာမ
ရှိပါဘူး” အစရှိသော နှိပ်နယ်စကား၊ ချိုးဖဲ့စကား၊ ကဲ့ရဲ့စကား၊ ရှုတ်ချစကားများသည် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လျက်ရ...ှိသည်ကို ကြားမိကြပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့သော အသုံး အနှုန်းသည် အင်္ဂလိပ်တို့လက်ထက်တွင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လာခဲ့၍ အင်္ဂလိပ်တို့ပြေးခါနီး ကာလအပိုင်း အခြားတွင် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သဖြင့် အများဆုံးသုံးနှုန်းပြောဆိုကြသည်
Author: lubo601 | 4:50 AM | No မှတ်ချက် |
by Mizzima မဇ္ဈိမ on Monday, August 29, 2011 at 5:58pm
ဒေါက်တာ စိန်မြင့်| တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၂ မိနစ်
၁၈ ရာစု ကတည်းက ပြင်သစ်ရေမွှေးများ အင်းဝဘုရင့် နိုင်ငံတော်သို့ စတင် ဝင်ရောက်လာခဲ့သော်လည်း ရနံ့ယဉ်သည့် ရိုးရာသနပ်ခါးသာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများ သည်းခြေကြိုက် ဖြစ်လျက်ပင် ရှိနေသေး သည်။ မကြာသေးခင် အချိန်အထိ မြန်မာအမျိုးသမီး အများစုမှာ သနပ်ခါးကို ကျောက်ပျဉ်ပေါ်တွင်သွေးကာ သနပ်ခါးအနှစ်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် လိမ်းခြယ်လျက် ရှိဆဲပင်။ နေအိမ်ရှိ မိခင်၊ ညီမ၊ အမ များထံမှ သနပ်ခါးနံ့များ သင်းပျံ့လာလေ့ရှိသဖြင့် သနပ်ခါးနံ့မှာ ကျနော်တို့နှင့် မစိမ်းလှပေ။
by အား မာန် on Monday, August 29, 2011 at 5:54pm
ကျနော်တို့ မြန်မာဆိုရိုးစကားမှာ “သူခိုးဓားရိုးကမ်းတယ်” လို့ ပြောရင် မှန်ကန်သူဘက်က မိမိဘက်က ရပ်တည်ပေး ရမယ့်အစား၊ ကူညီအားဖြည့်ပေးရမယ့်အစား မမှန်ကန် သူ မိမိရဲ့ရန်သူဘက်က ရပ်တည် ပူးပေါင်းသွားသူ သစ္စာဖောက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာပဲ ဆိုတာ ကို မြန်မာစကား မြန်မာစာ နားလည်တတ်မြောက်ကြ သူတွေအားလုံး လိုလိုသိကြပါတယ်။ ချီးမွမ်းပြောဆိုတဲ့ စကား မဟုတ်ပါဘူး။ စက်ဆုပ်ရှုံ့ချတဲ့စကား ဖြစ်ပါတယ်။
"လိင်ဈေးတန်းမှာ နင်းခြေခံလိုက်ရတဲ့ပန်းကလေး "
Author: lubo601 | 4:20 AM | 1 Comment |
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီကနေ ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်ကို အလုပ် လာလုပ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေး ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ဇူလိုင် (3) ရက်နေ့က မြန်မာ့အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြသခဲ့ရာမှာ အတော်ကို သဘာဝတရားနဲ့ ယုတ္တိ နည်းပါးလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်စရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
" ချစ်ခြင်း၏ ဧရိယာအတွင်းက လွန်းထားထား "
Author: lubo601 | 3:49 AM | 1 Comment |
by Myo Chit Myanmar on Monday, August 29, 2011 at 10:52am
ဒီနေ့ အချိန်ရတာနဲ့ အမရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ စာရေးဆရာမ လွန်းထားထားရဲ့ " ချစ်ခြင်း၏ ဧရိယာအတွင်း ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍ရနိုင်ပါသည် " ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
" နွေးအားမာန် " နဲ့ " ဇွဲနေသန် " ဆိုတဲ့ ထက်မြက် ထူးချွန်ပြီး မပြည့်စုံကြတဲ့ တက်သစ်စအရွယ် လူငယ်လေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို" သဝဏ်မေပျို " နဲ့ " နွေဥသြ " ဆိုတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ပညာ နဲ့ စည်းစိမ် ပြည့်စုံတဲ့ ချစ်သူ နှစ်ဦးက လျှို့ဝှက်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး လို့ အကျဉ်းချုံး ပြောလို့ရပါတယ် ...
Set Myo Oo created the doc:
"အမှောင်ထဲက အလင်းတန်း (၂)"
Author: lubo601 | 2:09 AM | No မှတ်ချက် |
ကျားတော့ ကျား ဒါပေမဲ့ ကိုးတောင်
Author: lubo601 | 2:00 AM | No မှတ်ချက် |
by Robina Lwin on Monday, August 29, 2011 at 12:07pm
`` ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ ပစ်လိုက်တဲ့ လောက်စာလုံးက..ငါ့အိမ်ပေါ်ကျတယ်ကွ..ဘယ်က
မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမတွေလည်း မသိဘူ´´
သရက်ပင်ပေါ်က သရက်သီးကို လောက်လေးဂွနဲ့ ပစ်နေတဲ့ ကလေးတအုပ် အဖေ့အသံကြားတာနဲ့ဝရုန်း
``ဟားဟား..တစ်ရပ်ကွက်လုံး အဖေကိုကြောက်လိုက်ကြတာ..ပူတူး အတွက်တော့ ရီစရာဘဲ´´
Author: lubo601 | 1:44 AM | No မှတ်ချက် |
by Hlaing Bwa on Monday, August 29, 2011 at 10:44am
တရုတ်ပြည်ရဲ့ တဟုန်ထိုးစီးပွါးရေး တိုးတက်လာမူကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ဟာ တရုတ်ပြည်ထဲက မြစ်တွေပျက်စီးခဲ့ရုံနဲ့ မပြီးပဲ မြန်မာပြည်ကိုမွေးဖွားသန့် စဉ်ပေးခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော မြန်မာအမျိုးသားပိုင် အမိဧရာဝတီကိုသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစဉ်ဆောက်နေတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဗင်းဆင့် ဗန်ဂိုး ( Vincent Van Gogh )
Htet Aung 10:16am Aug 29
“အနော်မာမြစ်မှ ယူဇနာသုံးဆယ်ကွာတဲ့နေရာမှာ……. အရန်တောင်ငါးလုံးရှိတဲ့ ရာဇဂြိုလ်ပြည် ရှိတယ်လို့ ဗုဒ္ဓဝင်မှာ တွေ့ရပေတယ်။ ဟုတ်ပေရဲ့လားပေါ်ဦးရဲ့”
by Shey SarSo on Sunday, August 28, 2011 at 5:30pm
မနေ့က စာရေးတင်ပြီးနောက်.... ငါရေးတာ အများရှေ့ချပြဖို့ သင့်သော်ခဲ့သလား ဆိုပြီး...ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ရေးပြီး တင်ပြီးမှတော့ ဘာလို့ ပြန်စဉ်းစားနေသေးသလဲ မေးစရာရှိတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘာကိုင်ကိုင် မလုပ်ခင်ကလည်း စဉ်းစားရတယ်။ လုပ်ပြီးရင်လည်း ပြန်ပြီး သုံးသပ်တဲ့အနေနဲ့ တစ်ခါ ပြန်စဉ်းစား စီစစ်ရတယ်။ ဒါမှ ရလဒ်က မျှတမှုရှိမရှိ၊ သင့်တော်၏၊ မတော်၏ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
by အား မာန် on Sunday, August 28, 2011 at 5:11pm
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ….အခုတလောကျွန်တော်တို့ဆိုက်လေးထဲမှာမိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊အနေအထိုင်နဲ့သောက်စားနေတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတွေအကြောင်းညီမလေး laminneain ပို့စ်လေးတွေရေးပြီး တင်နေတာဖတ်ရလို့ ကျွန်တော်ဒီပို့စ်လေးရေးဖြစ်တာ ပါ။ မြန်မာမိန်းကလေးညီမ ငယ်လေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ရေးတာပါ… မှားတာပါရင်လည်း စေတနာ အမှားပါ…။
by Seaman Nayminthu on Sunday, August 28, 2011 at 10:13am
နံနက် ၁၀ နာရီခန့်ရှိပြီ။
ဆောင်းရာသီပင်ဖြစ်သော်လည်း ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်သို့ ကျရောက်လာသော နေပူရှိန်ကြောင့် အိုက်စပ်စပ် ဝေဒနာ ခံစားရသည်။
ရတနာရေနံစင်နှင့် ရေမိုင် ၁၅ မိုင်ခန့်အကွာတွင် ကျောက်ချရပ်နားနေသော စစ်ရေယာဉ်(++)၏ ပဲ့ပိုင်း ကုန်းပတ်ပေါ်မှာ စစ်သည်တစ်စု ငါးခြောက်ခွဲသူခွဲ၊ ခွဲပြီးသားငါးတွေကို ရေဆေးပြီးနေလှန်းသူကလှန်း၊ နေလှန်းထားတဲ့အထဲက သိမ်းဆည်းဖို့သင့်တောပြီဖြစ်သောငါးခြောက်တွေကို ဆန်အိတ်ခွံထဲထည့်သူ ထည့်နှင့် ရေလုပ်သားတို့စုဝေးရာ တံငါအလုပ်ရုံလေးတစ်ခုကဲ့သို့ပင်။
by Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ on Sunday, August 28, 2011 at 3:37am
(၁) လူ့တစ်သက်မှာ ဝှက်ထားလို့မရတဲ့အရာ သုံးမျိုးရှိတယ်။
အဲဒီသုံးမျိုးက ချောင်းဆိုးတာ၊ ဆင်းရဲတာနဲ့ ချစ်တာဖြစ်တယ်။ ဒီအရာသုံးမျိုးကို ဝှက်ထားချင်လေလေ ပေါ်လေလေပါပဲ။
(၂) လူ့တစ်သက်မှာ မဖြုန်းတီးသင့်တဲ့အရာ သုံးမျိုးရှိတယ်။
အဲဒီသုံးမျိုးက ခန္ဓာကိုယ်၊ ငွေကြေးနဲ့ အချစ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအရာသုံးမျိုးကို ဖြုန်းတီးလေ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မျှော်လင့်ခြင်းများနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များ
by စာပေခရီးသွားခြေလှမ်းများ on Saturday, August 27, 2011 at 10:42pm
သင့်ရဲ့ ကလေးထံမှ တောင်းဆိုမှုတွေ များနေသလား....
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို အောင်မြင်စေချင်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထက်မြက်ပြီး အနုပညာပိုင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သားသမီးတွေကို ကျွန်တော်တို့ လိုချင်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးဟာ အောင်မြင်တဲ့ သားသမီးကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဂုဏ်ယူရမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့လဲ ၀မ်းသာမဆုံးဖြစ်မိမှာ သေချာပါတယ်။
Author: lubo601 | 10:33 AM | No မှတ်ချက် |
"နည်းပညာမြင့်မားလာမှုနှင့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ "
၂၁ ရာစု အတွင်းသို့ တဖြည်းဖြည်း ချဉ်းနင်း ဝင်ရောက် လာသည့် အခါတွင် ပြည်သူ လူထု အကြား အိုင်တီ နည်းပညာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပိုမို ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်လာကြသည်။ ယခင်က ကွန်ပျူတာ ဟု ဆိုလျှင် မော်တော်ယာဉ် အဟောင်းတစ်စီး ၏ ဈေးနှုန်းနှင့်နင်လား၊ ငါလားရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ရပ်ကွက်တိုင်းနီးပါးတွင်ရှိလာပြီဖြစ်သော အင်တာနက်ဆိုင်များ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ငွေကြေး များများစားစား သုံးစွဲစရာမလိုဘဲ ကွန်ပျူတာကို ထိတွေ့ခွင့်ရလာပြီဖြစ်သည်။
အတတ်ပညာ(သိပ္ပံ) အကြောင်း တစေ့တစောင်း ၁၊၊
by Aungzaw Win on Saturday, August 27, 2011 at 6:51pm
ပညာခေတ်၊ပညာသည်သာ အရာရာဟု ပြောရမလောက်ဖြစ်နေ သောယနေ့ကာလ သည်လူ့သမိုင်း တွင်
အချိုးအပြောင်းတစ်ခု အတွက်လမ်းစပေလား၊၊ စိတ်ဝင်စားစရာပင်၊၊
ခေတ်နှင့် အဆက်မပြတ်သူ မည်သူမဆို ကျားမ အရွယ်မရွေး ပညာမြှင့်တင် ရေးစိတ်ဝင်စားကြသည်၊၊
ဤ လိုလား နေသောပညာ ဆိုသည် ကို ရောရှင်း ရှင်းလင်းလင်းမြင် ကြပါသလားဆို သည်မှာ လည်း
Respiratory Tract Infection 4
Author: lubo601 | 6:37 AM | No မှတ်ချက် |
by ဆေးလောက on Saturday, August 27, 2011 at 1:58pm
Author: lubo601 | 5:50 AM | No မှတ်ချက် |
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄ထောင်ကျော် တိတိ ကျကျပြောရရင် ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၂၇၃၇ ဘီစီမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အင်ပိုင်ယာ ဘုရင်ကြီး ရှန်နွန်း ShenNung သူဟာ ရေကို ဆူပွက်အောင်ကြိုပြီးမှ သောက်လေ့ရှိ သတဲ့။ တစ်နေ့တော့ နောက်လိုက်ခြွေရံ တော်တွေနဲ့အတူ တောလည်သွားရင်းတော တွင်းတစ်နေရာမှာ စခန်းချအနားယူသတဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း အင်ပိုင်ယာရှင်ဘုရင်ကြီး အတွက် ရေပူပူနွေးနွေးသောက်ဖို့ နောက် လိုက်တစ်ဦးက ရေနွေးကျိုနေတုန်း အနီး အနားပတ်ဝန်း ကျင်က လေထဲမှာလွင့်ပါ လာတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်လေးတစ်ရွက်က ပွက် ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးခွက်ထဲ မတော်တဆ ကျရောက်သွားပါရောတဲ့။
”ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျဆုံးကွယ်လွန် တော့ သူ့ရဲ့အသက်ဘယ်လောက်လဲ” ဘယ်သူမှ မှန်အောင်မဖြေနိုင်။ မသိသူ များများ။ ဒီလို အလားတူ ဗဟုသုတမေးခွန်းမျိုး ပေါင်းများစွာကို မဖြေနိုင်တဲ့ ဘွဲ့ရလူငယ် ခပ်များများကိုစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်ဖွယ်ရာတွေ့ ရကြောင်း ဘီအေ၊ ဘီအက်စ်စီ၊ အမ်အေ၊ အမ်အက်စ်စီဘွဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး တွေကို ဂျာနယ်မှာ အလုပ်ခန့်ဖို့ လူ တွေ့နှုတ်မေးစစ်ဆေးတဲ့ အင်တာဗျူးအတွေ့အ ကြုံကိုဂျာနယ်လောက မှာ စောင်ရေအမြင့် ဆုံး ထုတ်ဝေနေဆဲ ဂျာနယ်တိုက်က သူ့ ကိုယ်တွေ့ကို ဖွင့်ဟ ပြောပြခဲ့တော့ကျွန်တော်သက်ပြင်းချမိတယ်။
by အား မာန် on Saturday, August 27, 2011 at 7:15pm
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြက်ထင် အပေါ်လွင်ဆုံး ရာဇ၀င်ရေးလမ်းကြောင်းသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးဖြစ်ကြောင်း မည်သူမှအငြင်းပွားစရာမရှိ။ ပန်းတိုင်နှင့်အကွာအဝေးကိစ္စတွင်မူ၊ ဤအရေးနှင့်ပက်သက်ငြိတွယ်သူအားလုံး အားလုံး၏…
by Yeyint Kyaw on Saturday, August 27, 2011 at 1:27pm
ဝင့်သင်ဇာကျော် ( Myit Makha Mediagroup )
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နှင့် ရွှေပြည်သာမြှိုနယ်တို့လို အခြေခံလူတန်းစားများ နေထိုင်ရာ မြို့နယ်အချို့ တွင် အသက် ၄-လ၊ ၅-လအရွယ်၊၆နှစ်အရွယ်နှင့်၊၇-နှစ်အရွယ် ဝန်းကျင်ရှိ ပိန်လှီနေသောကလေးငယ်များကို တစ်ရက်လျှင် ငှားရမ်းခ ငါးထောင်ပေးပြီး လူစည်ကားရာနေများတွင် တောင်းရမ်းခိုင်းခြင်းမျိုးများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
by Kyaw Thurein on Saturday, August 27, 2011 at 12:54pm
စာဖတ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားသော ဆရာချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ပြည်သူ့ အကျိုးပြုနှင့် လူမှူရေးတက်ကျမ်းစာပေများဖြင့် ယနေ့ လူကြီးလူငယ်များအတွက် ဦးနှောက်အဟာရ ဖြစ်စေသော စာပေများရေးသားလေ့ ရှိသည့် စာရေးဆရာကြီး ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)မှ စာဖတ်ခြင်း၏ကောင်ကျိုးနှင့် အတွေးအမြင်များကို စေတနာနိဒါန်း ၊ မေတ္တာနိဂုံးတို့ ဖြင့် တင်ပြခဲ့ပါသည်။
by ဂျူး - Ju on Friday, August 26, 2011 at 9:22pm
နင့်အပြုံးကြောင့် ငါ့ကိုယ်ငါ ရှက်သွားတယ်ဆိုရင် နင်အံ့သြမိမလားမသိဘူး။ တကယ်ကို ငါရှက်သွားတယ်။ အမှန်က နှစ်နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပြီပဲ။ ဒီလောက်ကြာမှတော့ တစ်ဖက်က ပြောင်းလဲတဲ့ အခြေအနေကို လိုက်ပြီး ငါ့ဘက်ကလဲ ပြောင်းလဲသင့်တာပေါ့။ အနည်းဆုံးဟာ.. နင်ပြုံးပြလိုက်တဲ့ အပြုံးမျိုးလေးကိုတော့ ငါတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ သင့်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် နင်ပြုံးသလို ငါမပြုံးတတ်ဘူး။ ဒီအတွက် ငါ့ကိုယ်ငါ ရှက်တယ်။
“စာရေးဆရာ အောင်သင်းပြောတဲ့ မြန်မာ့ပညာရေး”
by Min Naing on Saturday, August 27, 2011 at 12:23pm
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဆရာအောင်သင်းသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ကျောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဦးလွင် စစ်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန၏ လက်ထောက်ကထိကအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် အလွတ်ပညာသင် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် မြန်မာစာ နည်းပြအဖြစ် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ လွယ်တယ် ထင်သလား
by Socretes Athenisian on Saturday, August 27, 2011 at 10:58am
သင်္ကြန်ပြီးစ တစ်ရက်မှာ ကျောင်းသားဟောင်း သုံးလေးဦး ရောက်လာပြီး ထူးထူး ဆန်းဆန်း စကား ဆိုပါတယ်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပဖို့ ကြေညာ ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်
သူတို့ ပါတီ ထူထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်လို့ သူတို့ပါတီရဲ့ နာယက အဖြစ် တင်မြှောက်တာကို လက်ခံပေးပါဆိုတဲ့ စကားဖြစ်တယ်၊ ကြားကြားချင်း အံ့အားသင့်သွားပေမယ့် နောက်တော့ ပြုံးလိုက်မိပါတယ်၊
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်လောက်က တကယ့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လေးတစ်ပုဒ်ကို အရင်ပြောပြရ အောင်ပါ။ ကာလအနေနဲ့ပြောရင် မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူနေတဲ့ ကာလပါ။ ပြည်က ဝေသာလီပြည်မှာပါ။
အဲဒီကာလ အဲဒီဝေသာလီပြည်မှာပဲ မ၀ိမလာလို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်
ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀ိမလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်က အညစ်အကြေးကင်းစင်သူ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူပါ။ ဒါက တင်စား
ထားတဲ့ ရုဠီ နာမည်ပါ။ တကယ့်အရှိ အနွတ္ထအမည် မဟုတ်ပါဘူး။
by ရသစာပေအနုပညာဘလော့ဂ် on Friday, August 26, 2011 at 4:58am
အခုတလော ဘာစာမှလည်း အသစ်မရေးဖြစ် ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော့် Blog ကို ပြန်မွှေလိုက်တော့ ထွက်လာတဲ့ တင်ပြီးသား ဟာသ ဝတ္ထုတို အဟောင်းလေး တစ်ပုဒ်ကိုပဲ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ “၂၁ ရာစု ဒဿဂီရိ” ပါတဲ့။ တကယ်တော့ ဒီဝတ္ထုတို လေးဟာ ကျွန်တော့် စာပေဘဝရဲ့ အမှတ်တရပါ၊ မှတ်တိုင် တစ်ခုပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဟာသဝတ္ထုတို ပြိုင်ပွဲ လုပ်တော့ ကျွန်တော် ဒီဝတ္ထုတိုလေးနဲ့ ဆုရပြီး စာပေလောကထဲ စရောက် ခဲ့ပါတယ်။
by Soe Min on Sunday, August 14, 2011 at 2:43pm
by Lightof Saw on Friday, August 26, 2011 at 11:20am
အံ့သြစရာကြီးနော်အဖေ ဆင်ကြီးကို ဂဠုန်ကြီးက ချီသွားတာ
အေးသား....အခုဒီကိစ္စကို မင်းနဲ့အဖေ နှစ်ယောက်စလုံးတွေ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ မင်းဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောနဲ့.....ကြားလား´´
`` အာ....အဖေကလဲ ဘာလို့လဲဗျ၊ တကယ်ချီသွားတာကြီးကို.....´´
`` မပြောနဲ့ဆို မပြောနဲ့ကွာ မင်းကို နောက်မှ ငါရှင်းပြမယ်၊ ဒီအတိုင်းရှင်းပြရတာ နဲနဲ ခက်နေတယ်၊ လူတွေ ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး´´
မိဘအိမ်မှာ နေရတာကောင်းလား? ငါ့ကိုစိတ်ကောက်ပြီး နင်မိဘအိမ်ပြန်သွားတာ အခုဆိုရင် (၃၈)နာရီရဲ့ (၃၇)မိနစ်ရှိသွားပြီ။ ဒါဟာ အိမ်ကိုခွာတဲ့နင့်သမိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်ဖို့ အချိန်(၄)နာရီနဲ့(...၂၁)မိနစ်ပဲ လိုတော့တယ်။ အိမ်တိုင်ရာရောက် ငါလာတောင်းပန်ဖို့ကို နင်စောင့်နေခဲ့မှာပဲ။ ငါလည်း အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နင်တောင့်ခံပါဦး... ဒါဟာ နင့်သမိုင်းမှာ အိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့ အမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်ဖို့ နင်တောင့်ခံလိုက်ပါဦး...
by ဘဘကြီး ဘဘကြီး ဘဘကြီး on Thursday, August 25, 2011 at 4:07pm
ကဲ …. စာဖတ်သူ … ၊ ကံ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေပါစေ။ ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့သာ နေ့စဉ် ပြုပြင် လိုက်စမ်းပါ။ မကြာခင် ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်””
စာဖတ်သူ အသင်။ သင့်ကံ ဆိုးနေသလား။? ဒါမှမဟုတ် သိပ်ကံကောင်း နေတယ်လို့ ထင်လား။? ဒါမှမဟုတ်
ကံကောင်းတယ်လဲ မဟုတ် ကံဆိုး တယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သတ်မှတ် ထားသလား။?
Author: lubo601 | 11:04 PM | No မှတ်ချက် |
WEDNESDAY, 24 AUGUST 2011 07:32
တချို့ကပြောကြတယ်။ စစ်တုရင် ကစားနည်းဟာ အတော်ရှုပ်တာတဲ့ ဟုတ်ကဲ့။ စတုရန်း ၆၄ ကွက်။ တစ်ဖက်မှာ ကစားကောင်က ၁၆ ရုပ်စီ။ အမျိုးအမည် ၆ မျိုး။ နယ် ၈ ရုပ်၊ မြင်း ၂ ရုပ်၊ ဘုန်းကြီး ၂ ရုပ်၊ မိဖုရား ၁ ရုပ်၊ မင်းကြီး ၁ ရုပ်။ အနက် ၁၆ ရုပ်၊ အဖြူ ၁၆ ရုပ်။
ကစားတတ်ဖို့က အခြေခံအနေနဲ့ အရုပ်တွေ ရွှေ့ကွက်နဲ့ စားကွက်တွေ နားလည်ရမယ်။ ကစားတတ်ပြီ ဆိုရင် စနစ်တကျ ကစားတတ်ဖို့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေကို သိရမယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ အတွက်ကျတော့
ပြောရရင် စစ်တုရင်ကစားရာမှာ လိုက်နာရမယ့် 'စည်းကမ်း'ရယ် ကျင့်သုံးရမယ့် 'ကျင့်ဝတ်'ရယ် ဆိုတာ ရှိတယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ထက် ဆန်းကြယ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် ကလေးတွေကို အကြွေစေ့တွေ အကြောင်း ပြောရင် ယုံချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်လမှာ လစာခြောက်ဆယ်သာသာရတဲ့ ရုံးလုလင်တစ်ယောက် ၀င်ငွေဟာ မိသားစု ရှစ်ယောက် လောက်ငတယ်။ မနက်တိုင်း ကော်ဖီကြမ်းနဲ့ ပဲပြုတ် ထမင်းကြော် စားနိုင်တယ်ဆို ပုံပြင်လို့ ထင်မှာ။ သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှာကိုး။ သူတို့ခေတ်နဲ့ စားနိုင်
တယ်ဆို ပုံပြင်လို့ ထင်မှာ။ သူတို့ခေတ်နဲ့ ထင်ဟပ်ကြမှာကိုး။
ကျွန်မဖတ်၍ နှစ်သက်မိသော စာတစ်ပုဒ်
[ By Sanda Hlaing]
by ဘဘကြီး ဘဘကြီး ဘဘကြီး on Thursday, August 25, 2011 at 4:10pm
မစားဖြစ်လိုက်သော ဆမူဆာတစ်ခုနှင့် ဒဏ်ပေးခံရသောအမှန်တရားတစ်ရပ်
Author: lubo601 | 10:52 PM | No မှတ်ချက် |
by Lagoon Eain on Friday, August 26, 2011 at 10:12am
ဒီညကတော့ မိုးသည်းလွန်းသကွာ.....မိုးတိတ်မလားတိတ်မလားနဲ့ စောင့်ရင်း စိတ်မရှည်တာနဲ့ ဦးဦးလဲမိုးရွာကြီးထဲပဲပြန်ခဲ့တယ်....
အချစ်နိုင်ငံက ဒီမိုကရက်တစ် ချစ်သူများ (အပိုင်း ၄)
by အမှောင်တိုက်ကြား လူငယ် on Monday, July 18, 2011 at 8:17pm
March 8 ရက်နေ့ အမျိုးသမီးများနေ့။
“မိုးခရေ … ကနေ့က လမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲနော် အထူးလှုပ်ရှားသူတွေရှိရင် စာရင်းကောက်ထားရမရ်”
“ဟုတ်ကဲ့အကို … ဒီတခါတော့ အဖွဲ့စုံမရ်ထင်တရ် …။ ကျောင်းတွေကလဲ ပါမရ် ပြောတရ်”
“အခွင့်အရေးကို ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်မခံနဲ့ ကြားလား။ အဲ့ဒီမှာ ဒို့လူလွှတ်ထားပြီးပြီ။ သူကနေပြီး ကင်မရာရိုက်လိမ့်မရ်။ မင်းက ရုံးကပဲထိုင်ပြီး snapshot အတွက် တာဝန်ယူပြီးသိမ်းလိုက် မျိုးသန့်က အသံကို တာဝန်ယူထားတရ်”
“ဟုတ်ကဲ့ အကို ..”
by Sai Zay Yar Tun on Thursday, August 25, 2011 at 5:35pm
by စာပေခရီးသွားခြေလှမ်းများ on Thursday, August 25, 2011 at 1:50pm
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပန်းသီးပင် တစ်ပင် နဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိတယ်။
နေ့တိုင်း အဲဒီကောင်လေးက ပြေးလာပြီး ပင်စည်ပေါ် တက်ပြီး သစ်ပင်ပေါ်မှာကစားတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းသီးတွေကို စားလေ့ရှိပါတယ်။
သစ်ပင်နဲ့ ကောင်လေးဟာ အတူတူ တူတူပုန်းတမ်းကစားကြတယ်။ ကစားလို့ မောသွားပြီဆိုရင် ကောင်လေးဟာ သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ အိပ်လေ့၇ှိတယ်။
"လုံလောက်ပြီ၊ ဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး"
Author: lubo601 | 5:00 AM | No မှတ်ချက် |
တခါတုန်းက အိမ်တအိမ်မှာ တံခါးနှစ်ချပ်ရှိပါတယ်။ တံခါးတချပ်က အရမ်းလှပတဲ့ ဧည့်ခန်းတံခါးဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ် တံခါးတချပ်ကတော့ သာမန် ရေချိုးခန်းတံခါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတံခါးနှစ်ချပ်ဟာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ မတူညီပေမယ့် ဘ၀တူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအိမ်မှာ နေတဲ့ ကလေးတွေဟာ တံခါးတွေကို ဆောင့်ပိတ်လိုက်၊ ကန်ကျောက်လိုက် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုးသွမ်းကလေးတွေ ဖြစ်လို့ ပါပဲ။
by Shey SarSo on Thursday, August 25, 2011 at 5:31pm
"ဟေ့ရောင် မင်းက ဟိုဖက်ဝိုင်း" "ငါက ဒီဖက်ဝိုင်း"
"ငါက ငါးခေါင်း အရမ်းကြိုက်တာ"
"မင်း ရွှေရင်အေး သောက်ချင်လား...ငါတောင်းပေးမယ်"
Author: lubo601 | 4:49 AM | No မှတ်ချက် |
by ဆေးလောက on Thursday, August 25, 2011 at 6:39pm
ဖေ့စ်ဘွခ်ရဲ့ Privacy Options ပြောင်းပြီ
Thursday, 25 August 2011 02:50	သုခသခင်
ဖေ့စ်ဘွခ် အသုံးပြုသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒေတာတွေကို ထိန်းချုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိစစ်သုံးသပ်ရင်း ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် အဓိကပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွခ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
“သားရေ…အဖေ့ကို ဆေးလိပ်လေး နှစ်လိပ်လောက်ဝယ်ပေးစမ်းဟေ့…မင်းသူ ဆိုင်ကနေ…ပြီးတော့ အဖေစားနေကျ ကွမ်းတစ်ရာဖိုး ပါဝယ်ခဲ့”
ပိုက်ဆံယူပြီးထွက်လာခဲ့တော့ ကိုမင်းသူ ကွမ်းယာဆိုင်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်။ သူ့လိုပင် ဆေးလိပ်လာဝယ်သည်ထင်ပါရဲ့။ သူတို့အဖေတွေသည်လည်း သူ့အဖေလိုပင် ကွမ်းစား၊ ဆေးလိပ်သောက်သည်ကို တွေ့ဖူးသည်လေ။
by Moenge Aung on Thursday, August 25, 2011 at 5:55pm
ကျနော်ဖတ်မိသမျှ မှတ်မိသမျှလေးကို မျှဝတဲ့သဘော ပါခင်ဗျာ။ မှားယွင်းမှု့များရှိခဲ့ရင် ဝေဖန်ထောက်ပြပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခေတ်က သိပ်ကိုတိုးတက်လာပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်က ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ လူတွေရဲ့ ကြံစည် ပြောဆို ပြုမူဆောင် ရွက်ပုံတွေကလည်း သိပ်ကိုဆန်းကြယ်လာပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်က လူတွေကို မရိုးသားမှုဆီ တွန်းပို့နေတယ်လို့ ကောက်ချက်ချရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တနေ့ထက်တနေ့ ဆန်းပြားလာတဲ့ လူမှုဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်က ရိုးသားမှုဆီအရောက်သွားဖို့ လမ်းတွေကို ကျဉ်းမြောင်းလာ စေတယ်လို့တော့ မယုတ်မလွန်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
"ကဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေချန်ထားခဲ့ကြမှာလဲ"
Author: lubo601 | 3:53 AM | No မှတ်ချက် |
"လူတိုင်းမှာ စဉ်းစားဖို့ ခေါင်းတစ်လုံးရှိတယ်"
Author: lubo601 | 3:49 AM | No မှတ်ချက် |
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများက အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိသော်လည်း မြန်ဆန်လိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
by 7Day News Journal on Wednesday, August 24, 2011 at 6:12am
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဇော်၏ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရှုရန် ဖတ်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး "ဘောလုံးဝါသနာပါတော့ သွားကြည့်ရင်လည်း ကြည့်ဖြစ်မှာပေါ့"ဟု ရယ်မောရင်းဖြေကြားနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကာတွန်းတွေ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ သုံးမိတာ တောင်းပန်ပါတယ်
by Naing Htoo Aung on Monday, August 22, 2011 at 7:07am
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းသည် လတ်တလော အခြေအနေတွင် ယခင်နေ့များနှင့်မတူပဲ အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး ကစားကွတ်များဖြင့် အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲနေသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။ တိုးတက်သည်ဟု ယေဘူယျ သဘောထားနိုင်သော်လည်း အများစုကမူ လက်မခံလိုကြပေ။ အရေခွံချွတ် အစိုးရ၏ ပြောင်းလဲလာနေမှုကို မယုံသင်္ကာဖြစ်သူများက အများစုဖြစ်နေသည်။ အခွန်ကိစ္စ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် စသဖြင့် စသဖြင့် ခုတစ်လော ဖြစ်ပျက်နေသမျှတို့တွင် မြစ်ဆုံဆည် ကိစ္စနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိစ္စတို့သည် အကျယ်လောင်ဆုံးသော ကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။
ဖုန်းယဉ်ကျေးမှု နှင့် လူမှုရေး ပြဿနာ
"ဟလို ...ဟလို ...ကြားလား ... ကြားလား ...ကိုယ်လာနေပြီလေ ... ခဏစောင့်နော် ... "လူပုံစံက
ဗိုက်ရွှဲရွှဲ၊ အသားက မည်းမည်း၊ ဘယ် လက်မှာ Rolax နာရီ၊ ညာ လက်မှာ ရွှေဟန်းချိန်း စတိုင် ဟန်ပန် အပြည့်နဲ့ ဖုန်းပြောရင်း တက်လာတဲ့ အမျိုးသားကို တစ်ကား လုံးက ဘုကြည့်ကြည့် မျက်စောင်း ထိုးပြီး စိတ်ထဲက ဝိုင်းဝန်းမေ တ္တာပို့နေကြမှာတော့ အသေ အချာပါပဲ။ ဖုန်းကတ် တန်ဖိုး သိန်း သုံးဆယ်၊ လေးဆယ့် ငါးသိန်းခေတ်မှာ လူကြား သူကြားဟန်ရေး ပြကြွား လုံးထုတ်ဖုန်း ပြောတာကိုတော့ နားလည်ပေးလို့ ရပေမယ့် လမ်းဘေးဈေးသည်က အစ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဗယာကြော် လှည့်ရောင်းတဲ့ မာမူကြီးတို့ အဆုံး ဖုန်းကိုင်နိုင်တော့ မယ့်ခေတ်မှာ ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ဟန်ပန်နဲ့ အလိုက် ကန်းဆိုးမသိ ဖုန်းအော်ပြောတတ်တဲ့ သူတွေ နေရာ တကာ မကြာခဏ တွေ့ကြုံနေရတာ အံ့ဩလို့ မဆုံးဖြစ်မိပါရဲ့။
အွန်လိုင်း လုံခြုံမှုသည် သင့်လက်တွင်းမှာ ရှိသည်(၁)
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အင်တာ နက် သုံးစွဲ သူ ဦးရေ နဲ့ အင်တာ နက် သုံးစွဲနိုင်မှု အခွင့် အလမ်းဟာ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းမှာ သိသိ သာသာ တိုးတက် လာပါ တယ်။ အင်တာနက် ကနေ ငွေရေးကြေးရေးကို စီမံဆောင်ရွက် မယ့်Online banking ဆိုတာကို ကြိုးစား သူတွေ ရှိနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက် သုံးစွဲသူ အများစုရဲ့ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံမှုနဲ့ အွန် လိုင်းလုံခြုံမှု အပေါ် အလေး ထားတဲ့ အတိုင်း အဆဟာ အလွန် အားနည်းနေဆဲ ပါပဲ။
"ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်အား မြှင့်တင်နည်း"
Author: lubo601 | 7:49 AM | No မှတ်ချက် |
ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ရန်မှာ အရေးကြီး သည် ဆိုသော်လည်း မည်သို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်လာ နိုင်မည် ဆိုသည်မှာ ဦးနှောက် ခြောက်စေမည့် မေးခွန်းမျိုး ဖြစ်သည်။ အချို့ တွင် ခေါင်းဆောင် တို့ ကောင်းပါ လျက်နှင့် နောက်လိုက် နောက်ပါ တို့မကောင်း၊ နောက်လိုက် တို့ ကောင်းပြန်သော် ကား ခေါင်းဆောင်က မကောင်း ဖြစ်နေတတ် ပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ဘက် စလုံး ကောင်းမွန်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများမှာ လိုအပ်လာပေပြီ။
သတင်းမီဒီယာများ အပါအ၀င် ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို လွှတ်တော်များက ခံယူသွားကြရမည် ဟုပြောကြား။
by Yeyint Kyaw on Wednesday, August 24, 2011 at 9:11am
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ ပထမ နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက သတင်းမီဒီယာများ အပါအ၀င် အများပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်အကြံပြုမှုများကို မိမိ တို့ ခံယူသွားကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အငယ်က မိမိတို့နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကပ္ပိယကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဦးဖိုးငယ် နဲ့ ဦးသာမှတ် တဲ့၊ ဦးဖိုးငယ်က မျက်စိ မမြင်တဲ့ ဒုက္ခိတကြီး။ ဦးသာမှတ် ကတော့ အသက်အရွယ်အလျောက် အိုမင်းတာကလွဲလို့ အားလုံး အင်္ဂါစုံလင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတော့ ရွာထဲမှာ ဆူဆူညံညံမနေလိုတာနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကပ္ပိယ အဖြစ်လာနေတာ။ သူက ရွာမှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦးသာမြတ် ရဲ့ အစ်ကိုအရင်းပါ။
ဒါပေမယ့် ညီအစ်ကိုချင်း တယ်ပြီး သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြဘူး။ မခေါ်မပြောရယ် လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စရိုက်ချင်းမတူ ညီကြတော့ ဖာသိဖာသာပဲ နေကြတာပါ။
ခုတော့ သိပြီလေ - ၂
by ဂျူး - Ju on Wednesday, August 24, 2011 at 12:25am
မိုးပြာနဲ့ ခင်လေးကလဲ ဟားတိုက်ပြီး ရယ်တော့ အေးမလဲ ရယ်မိတယ်။ အခုတော့
နောက်ပိုင်းဆို မိုးပြာက သူ့ရင်ကို လက်နဲ့ဖိပြီး ။
"ကျွန်တော် ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာဗျာ" ဆိုတဲ့ ဟန်ကိုလုပ်ပြနေတတ်တယ်။
ဒီတုန်းက သူတို့နဲ့ အတူရောရယ်နိုင်တာကို အံသြလို့ မဆုံးဘူး။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် စီးပွားရေးပညာ ဘာသာရပ်ဖြင့...
"ပညာရေး- ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယ အသုံးချမှု အနုပညာ (Educati...
ကဒါဖီ ဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါလဲနှင့် အခြားဆက်စပ်သ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အထွေထွေ လွတ်ငြိ...
၂၀၁၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင...
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မျှော်လင့်ခြင်းများနှင့် အနာဂတ်မျိုး...
မစားဖြစ်လိုက်သော ဆမူဆာတစ်ခုနှင့် ဒဏ်ပေးခံရသောအမှန်...
ကာတွန်းတွေ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ သုံးမိတာ တောင်းပန...
သတင်းမီဒီယာများ အပါအ၀င် ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာ...
[By Thein Myint] “မောင်လေးကြီးရင် ဘာလုပ်မယ်၊ မမေ...